Naxaas Copper, Cu5Si - Goodao Technology Co., Ltd.
Koobka loo yaqaan 'Cupric silicide' (cu5si), oo sidoo kale loo yaqaan 'cupric silicide', ayaa ah silikoon silikoon ah oo ka sameysan naxaas, kaas oo ah macdan isku dhafan oo bir ah, taas oo macnaheedu yahay in hantidiisu ay u dhexeyso xeryahooda ionic iyo alloys. Waxay leedahay hagitaan aad u fiican, kuleylka kuleylka, ductility, iska caabbinta daxalka iyo adkeysiga. Filimaanta naxaasta ah ee naxaasta ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhajiyo jajabyada ku saleysan naxaasta, la joojiyo baahintooda iyo socdaalka elektaroonigga ah, iyo in loo dhaqmo sidii caqabado faafitaan.
Miisaanka molikalka: 345.81
Silikoon naxaas ah
Qaaciddada Molecular: Cu5Si
Coppersilicidecm; naxaas; silikoon
Barta dhalaalida: 825 ° C
Nadiifinta naxaasta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa isku-darka tooska ah ee xeryahooda organosilicon ee warshadaha.
Dareen-celinta, silsiladda naxaasku waxay Silicify kartaa chloromethane. Tusaale ahaan, dimethyldichlorosilane ganacsi ahaan waxtar leh waa la diyaarin karaa. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa warshadaha elektarooniga ah -vacuum - wareegga isku dhafan - markab - Gawaarida - Warshadaha Iftiinka - Aerospace iyo meelaha kale ee sayniska iyo farsamada!
Hore: Cobalt Silicide, CoSi2
Xiga: Budada Tantalum Silicide, TaSi2